Maxamed Cusmaan Jawaari oo u Jawaabay Cabdi Raxmaan Faroole digniin au diray. | warsugansomaliya.wordpress.com
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa waxa uu si aad ah u dhaliilay Cabdi Raxmaan Faroole, madaxweynaha maamulka Puntiland, oo uu sheegay in uu yahay nin iska sheega wax uusan ka fiirsan.
“Dastuurka Soomaaliya cid wax ka bedeshay ma jirto. Mana laga bedeli karo iyada oo aan cidina la socan. Ma aha in saxaafada laga qeyliyo, wixii uu tabanaayo Cabdi Raxmaan Faroole waa in uu soo bandhigaa si dastuurka waafaqsan. Waxa aan leeyahay Faroolow idaacadaha in aan arinta uga dhigto issue waxaa ka wanaagsan in aad baarlamaanka u soo bandhigto wixii aad u fahamto qalad”, Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cusmaan Jawaari, ayaa sidaa ku yiri wareysi uu siiyay TV af-soomaali ku hadla.
Waxa uu intaa raaciyay in dastuurku uu yahay mid qabya ah oo la doonayo ugu danbeyn in la dhameestiro maadaama markii horaba aysan sameyn dowlada Soomaaalidu
Digniinta Jawaari ayaa waxa ay imaaneysaa iyada oo waayihii danbe Cabdi Raxmaan Faroole uu aad ugu cel-celinayay in dastuurka dalka ee qabyada ah wax badan si qarsoodi ah ay wax uga bedeshay.
Horay dowlada Soomaaliya ayaa waxa ay u cadeysay in aan dastuurka wax laga bedelin inkasta oo maamulka Faroole ay soo ban-dhigeen qodoba dhowr ah oo uu sheegay in ay yihiin kuwa laga bedelay dastuurkii qabyada ahaa.
← Mid kamid ah La taliyaasha Madaxweynaha Soomaaliya oo lagu xukumay in uu bixiyo lacag dhan 15-Milion oo Dollar OO Magdhaw ah
Mid kamid ah Hay’adaha Dalka ka howl gala oo lagu eedeeyay in ay si qarsoodi ah uga gurato kheyraadka dabiiciga ah ee Dalka. →